Izindaba - Indinganiso yokukhethwa kwebakaki le-iron castrail
Ukuhlobisa i-Metal Material
Laser Cutting Ishidi
Cover, Cap futhi Thumela
Ihenjisi Kanye Nezinye Izingxenyekazi Zekhompyutha
I-Boll engenalutho ne-Solid
Isisetshenziswa Sokucubungula Insimbi
Ukukhethwa standard for ibhuloho cast iron guardrail ubakaki
Ubakaki wensimbi owakhiwe ngensimbi ubizwa nangokuthi ubakaki wensimbi, umgwaqo onguthelawayeka, ubakaki wensimbi oboshelwe insimbi, ubakaki wensimbi, ubakaki wensimbi, ubakaki wokuvikela ukushayisana, umugqa omkhulu wepayipi lensimbi, ifreyimu yesitimela sepayipi.
Ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi yokwakhiwa kwesisekelo sebhuloho, kanye nokufakwa okulula, ukulungiswa, ukubuka, nokufaka esikhundleni sokwesekwa kwebhuloho, noma ngabe kwakhiwe ngendlela yogongolo lwe-cast-in-place noma indlela ye-precast beam, akunandaba hlobo luni lokuxhaswa kwebhuloho olufakiwe, ukwesekwa kwebhuloho kufakwe pier. Kuyadingeka ukusetha umcamelo osekelayo ngaphezulu. Ubakaki wensimbi yensimbi ubizwa nangobakaki wesitimela wensimbi webhuloho, ubakaki wensimbi owenziwe ngensimbi, umgwaqo onguthelawayeka wensimbi, ubakaki wensimbi owugqinsiwe, ubakaki wensimbi, ubakaki wensimbi, insimbi yokulwa nokushayisana, ipayipi lesitimela ukwesekwa. Inqubo yokusekelwa kwensimbi: ukubunjwa kwesihlabathi, imikhiqizo eqediwe, isandblasting, nokuqeda ukupenda okuphelile
Ngesikhathi sokwakhiwa kocingo lwensimbi oluphoselwe, ochwepheshe bazohlola futhi balungise ukusebenza okungekho emthethweni endaweni yokwakha ngesikhathi. Beka phambili ama-oda wokulungiswa kwekhwalithi nezinyathelo zokuguqulwa kwenkinga yekhwalithi ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yephrojekthi ihlangabezana nezidingo zokwakhiwa nokucaciswa kokwamukelwa.
Umzila webhasi wokuhlukaniswa ngabasebenzi:
Izikhungo zokuzihlukanisa ezinhlangothini zombili zebhasi zihlukaniswe neminye imizila. Ucingo lokuhlukaniswa kwabantu ngamaselula: indawo yokuzihlukanisa okulula ukuyishiya ngaphandle kwengqalasizinda eshumekiwe phansi. Ucingo oluhlukanisiwe lokuzihlukanisa: Izindawo zokuzihlukanisa ezingcwatshwe noma ezenziwe ngaphambili emhlabathini futhi zilungiswe ndawonye.
Kufanele kube nolayini ababili abahambisanayo bomkhawulo ongaphezulu nophansi, ukuze izingqimba ezingenhla nezingezansi ze-guardrail ziqonde ngemuva kokufakwa. Lapho sikhiqiza okokuvikela utshani, sidinga ukufaka imibala ezinsikeni ngezidingo zamakhasimende. Iyiphi indlela yokufaka imibala esetshenziswa kakhulu? Okulandelayo, ake sethule ifektri yotshani yokuvikela izingane. Ngokwethulwa komkhiqizi womshini wokugunda utshani, izindlela ezisetshenziswa kakhulu zokufaka imibala yilezi: ukufafaza ebusweni: fafaza ngendlela efanayo umbala wokumboza okhethiwe ebusweni obubonakalayo be-PVC guardrail. Ingafafazwa ohlangothini olulodwa noma ezinhlangothini zombili. Imibala ehlukahlukene, ukukhiqizwa okuguquguqukayo nokusebenziseka kalula. Indlela ye-extrusion yephrofayili emnyama: Faka i-masterbatch yombala kwifomula yephrofayili ye-PVC, bese ukhipha iphrofayili emnyama nge-extruder.
Lapho ufaka uthango lwe-cast iron, naka ukuqaliswa okuqinile kwamazinga ekhwalithi yobunjiniyela. Izinhlobonhlobo, ukucaciswa, imodeli nobukhulu bocingo lwensimbi kumele kuhlangabezane nezidingo zobunjiniyela nezokuklama. Ama-welds ashiselwe ngokuphelele futhi apholishiwe kahle. Muhle, usayizi wokukhiqiza unembile, umkhiqizo uvundlile futhi ume mpo, futhi uhlangabezana nezidingo zokwakhiwa nezindinganiso zokwamukelwa.
Ubakaki wokugada uyisikhungo sokuzihlukanisa esisetshenziselwa ukuvala izinhlangothi zombili kulayini ukuvimbela abantu, izilwane nezimoto ezingezona ezezimoto ukuthi zingene emgwaqeni omkhulu. Futhi inekhono lokumunca amandla okushayisana, iphoqelele izimoto ezingalawuleki ukuthi zishintshe izinkomba futhi zizibuyisele endaweni yokuqala yokushayela, ukuvimbela Inomphumela wokuphuma emgwaqweni noma ukuwela ngaphansi kwebhuloho. Ngokwezici zayo zomshini, i-guardrail ingahlukaniswa ibe yizinhlobo ezintathu: i-guardrail eqinile, i-guardrail eqinile kanye ne-guardrail eguquguqukayo. I-anti-collision guardrail, njengesikhungo esidingekayo sezindlela ezihamba phambili, inomthelela othile ekuphepheni okushayela ngesivinini esikhulu, entofontofo yokushayela, ekubukeni komgwaqo ohamba phambili, nasezindlekweni zobunjiniyela. Ngakho-ke, lapho sakha izindlela ezihamba phambili, kufanele siziqonde ngokugcwele izigaba ezahlukahlukene zokuvikela ukushayisana. Izici zifaka indlela yayo yokulwa nokushayisana, izindleko zephrojekthi, ukwakhiwa kalula, izindleko zokulungisa, izakhiwo zokulwa nokukhanya, nokulungiswa kwepayipi lokuxhumana.
Ubakaki wokuvikela ukushayisana kwebhulorho wenziwe nge-cast iron njengempahla eluhlaza. Yenziwe ngesihlabathi sokubumba-ukusakaza-okuqediwe komkhiqizo owakha-isihlabathi ukuqhumisa-ukufutha kwesifutho. Ngokuvamile, amabhuloho amakhulu amakhulu, amabhuloho namabhuloho aphakathi nendawo afana nezitimela ezihamba ngemigwaqo kanye nemigwaqo emikhulu esezingeni lokuqala kufanele kungabi nemibandela. Isigaxa sensimbi yensimbi efakiwe ifakiwe emhlabathini; ubakaki wensimbi wokuvikela insimbi ulula ngesisindo, uphansi ngentengo, ulungele ezokuhamba, ukufakwa, ukunakekelwa nokugcinwa; ngakho-ke, ibanga lokushisa lokusetshenziswa libanzi. Ngokwakhiwa kwezinto zokuhamba, imigwaqo emikhulu ejwayelekile, imigwaqo emikhulu, namabhuloho amakhulu naphakathi nendawo afuna ukuphepha kokushayela ngesivinini esikhulu, induduzo yokushayela, ukwakheka komgwaqo, izindleko zobunjiniyela, njll. inqubo yokukhiqiza. Sakaza i-iron guardrail Izinhlobo ezintathu zabakaki nabakaki bensimbi engagqwali. Kunezincazelo eziningi namamodeli wabakaki be-bridge guardrail, khumbuza wonke umuntu ukuthi anake lapho ekhetha amabhulogi wokuvikela: uma kuyibhuloho elikhulu noma eliphakathi nendawo, ungakhetha isitayela esifanayo se-guardrail, esingakhuphula ubuhle bebhuloho; uma kuyintaba noma indawo esezintabeni, ingasetshenziswa. I-guardrail ehlanganisiwe noma yohlobo lwe-beam; lapho sihlangana namabhuloho ensimbi, kufanele sikhethe insimbi noma ingxubevange yama-guardrails; lapho uhlangana namabhuloho amade ikakhulukazi anezikhala ezinkulu zebhuloho, kuyadingeka ukuthi unake ukwamukela uhlobo olufanele Noma ukhonkolo oqinisiwe wodonga lwensimbi.
I-Bridge guardrail isho i-guardrail efakwe ebhulohweni. Inhloso yawo ukuvikela izimoto ezingalawuleki ukuthi ziphume ebhulohweni, nokuvimbela izimoto ukuthi zingagqobhozi, ziwele ngaphansi, zidlule ibhuloho, futhi zihlobise isakhiwo sebhuloho.
6. Iphayiphu mm / m. I-deformation incane ngaphansi kwethonya lokushisa. Ukuqhutshwa kokushisa okushisayo kuncane, futhi ukusebenza okulwa nokuqandisa kungcono kunalokho kwamapayipi wokukhipha insimbi.
Le nkampani ikakhulukazi ikhiqiza izinhlobo ezahlukahlukene zamapayipi wokukhipha insimbi yebhuloho, ikakhulukazi abhekele amanzi emvula nomsele wamanzi onguthelawayeka. Ipayipi lokukhipha insimbi yipayipi lensimbi elingaphandle elenziwe ngensimbi ephakeme kakhulu nezinye izithasiselo. Ngokwezidingo ezahlukahlukene zamanzi, ububanzi bangaphakathi bomgodi wepayipi bungahlukaniswa bube ngu-0.10m-0.15m, futhi ukuphela okuphansi kwepayipi kufanele kunwebe okungenani u-0.15 ngaphansi komgwaqo. -0.20m, ukuvikela ukuphuma kwephepha nokumanzisa ebusweni bezimbambo ezinkulu zesigxobo, ubukhulu bemigodi yamapayipi bungahlukaniswa ngo-10mm * 1mm-30mm * 3mm, futhi zingasatshalaliswa ngokulinganayo ebangeni lama-360 degrees , Ama-degree angama-270, ama-degree angama-180, nama-degree angama-90. Isetshenziswa kabanzi emikhakheni yokuhambisa amanzi njengemigwaqo emikhulu, ojantshi bezitimela, amaphrojekthi wesitimela, imfucumfucu kadoti, imigudu, amabhande aluhlaza, izinkundla zemidlalo nokuvikelwa kwemithambeka okubangelwa okuqukethwe kwamanzi amaningi, kanye nengadi yezolimo nokunisela komhlaba nezinhlelo zokuhambisa amanzi. Ngokubambisana namapayipi athambile angenela kanye nomsele oyimpumputhe oplastiki, sekuyimikhiqizo emithathu eyinhloko ekwakhiweni kobunjiniyela bomphakathi (amapayipi okuhambisa amanzi namanzi) ezweni lami.
1. Ukuphepha kwamanzi:
I-orifice itholakala emgodini wegagasi. Ngenxa yesenzo esiphindwe kabili se-wave crest nendwangu yokuhlunga, i-orifice akulula ukufakwa, okuqinisekisa ukuhamba kahle kohlelo olungenekayo.
Inhlanganisela yemvelo yamandla nokuzivumelanisa nezimo:
Isakhiwo esiyingqayizivele sikathayela sithuthukisa ngempumelelo ingcindezi yangaphandle yomkhiqizo, futhi uhlelo lwamanzi ngeke lukhubazwe yingcindezi yangaphandle yokuthinta umphumela wamanzi.
Ukukhethwa kwefomu le-guardrail form kufanele kuqala kunqume ibanga lokulwa nokushayisana ngokwendlela yomgwaqo omkhulu, kubhekwe ngokuphelele ukuphepha kwayo, ukuxhumanisa, izici zento ezovikelwa, nezimo zejometri yesiza, bese ngokuya ngesakhiwo sayo, umnotho, ukwakhiwa nokugcinwa. Izici ezinjengokukhethwa kwefomu lesakhiwo. Indlela yokushumeka ifaka izindlela ezintathu: ikholomu ishumeke ngqo, uhlobo lokuxhuma kwe-flange, ne-guardrail yebhuloho kanye nedeski lebhuloho kuthelwa emzimbeni owodwa ngemigoqo yensimbi edlulisa amandla. Uma izimo zivuma, i-guardrail ekhishwayo ingasetshenziswa.
Isikhathi sokuthumela: Mar-20-2021
Indlela yokugcinwa kocingo lwensimbi
Umehluko phakathi kocingo lwensimbi ne-zin ...
Ukukhethwa ejwayelekile ibhuloho cast iron g ...
Ikheli: 16KM SITE S203 WUFAN ROAD ISIFUNDA SHIJIAZHUANG CHINA
Ucingo lokuhlobisa, Ukunyathela Okuthunyelwe, Ingadi Ebiyelwe, Handrail Tube, Ishidi Lensimbi, Ukuhlobisa kwe-Iron Gates,